Handeha any Budapest izahay amin'ny vidin'ny 40 euro - Jereo ity tolotra tsara | Vaovao momba ny dia
Makà a tapakilan'ny fiaramanidina 40 euro sarotra be izany. Bebe kokoa, rehefa tonga amin'ny toeran-kaleha toa azy Budapest. Ny renivohitr'i Hongria dia iray amin'ireo toerana be mpangataka indrindra amin'ireo mpizahatany. Zavatra tsy manaitra antsika satria ny hatsaran-tarehiny dia voamarika.
Azonao atao izao ny mandany andro roa mandeha amin'ny arabe ary milentika amin'ny zavatra rehetra atolotra, izay tsy kely akory! Raha ny fahafantarantsika fa ireo karazana tolotra ireo dia tsy maharitra, raha ny vidin'ny 40 euro manjavona, mbola manana safidy tsara hafa ianao, miaraka amin'ny fahasamihafana iray izay tsy ho hitanao. Te hahita izany ve ianao?
1 Ny tolotra tsara amin'ny sidina 40 euro mankany Budapest
2 Hotely tetibola any Budapest
3 Izay ho hita ao Budapest ao anatin'ny roa andro
3.2 Fiangonana Matthias
3.3 Bastionan'ny mpanjono
3.4 Tetezana rojo
3.6 Kianja mahery fo
Ny tolotra tsara amin'ny sidina 40 euro mankany Budapest
Nahita tolotra izay tsy azontsika eritreretina loatra. Izy io dia zavatra resahinay foana rehefa mamela anao hanana an'ity karazana ity izahay, saingy tena marina izany. 40 euro izy ireo, mandeha mandroso. Ny marainan'ny maraina dia miala ao Madrid ny fiaramanidina ary ho tonga ianao renivohitr'i Hongria Amin'ny 10 maraina. Zavatra tonga lafatra satria manome fotoana anao hisakafoanana maraina ary mandeha any amin'ny hotely handatsaka ny kitaponao.
Avy eo, efa manana ny tontolo andro ianao hitsidihana an'ity tanàna lehibe ity. Araka ny efa nolazainay, raha manjavona ilay naoty 40 euro dia manana fotoana hafa ianao amin'ny endrika 55 euro, izay tsy ratsy koa. Safidy vaovao mamela anao a kitapo tanana ary io hitantsika io dia lafo be ihany koa. Tsy mieritreritra ve ianao? Raha te-hanao famandrihana ianao na ny iray hafa dia manana ny zava-drehetra ao amin'ilay pejy ianao eDreams.
Hotely tetibola any Budapest
Manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 11 Novambra efa manana drafitra ianao. Nanapa-kevitra ianao ary namandrika ny sidina. Zavatra izay, tsy isalasalana, fantatsika fa safidy lehibe. Fa raha manana sidina ianao dia manana ny itoeranao izao. Satria araka ny fantatsika tsara, tsara kokoa ihany koa ny mamela azy io mifatotra alohan'ny dia. Nahita safidy tsara ho anao izahay.
Mbola misy trano sisa tavela eo akaikinay afovoany izahay. Angamba mety hisy tabataba kely kokoa noho ny an'ny hafa, fa ny tena marina dia 16 euro no vidin'ny roa alina. Raha mijery azy ianao, dia tsara ny valiny, ka tsy afaka mangataka zavatra hafa aminao intsony izahay. 'Efitranon'i Covin Point' dia toeram-pialan-tsasatrao rehefa avy nahalala ny tanàna. Ka dia nandoa vidiny ambany izahay mba hamerenana fotsiny ny baterinay ary hiverina amin'ny lalan'ny fizahan-tany. Raha misafidy an'ity safidy mora ity ianao dia azonao atao ny mamandrika azy amin'ny Hotels.com.
Izay ho hita ao Budapest ao anatin'ny roa andro
Rehefa roa andro na ora vitsivitsy monja amin'ny dia ataontsika, dia tsy maintsy ataontsika izay hahasoa. Noho izany, hifantoka amin'ireo lafiny rehetra izay tena ilaina isika.
Ao amin'ny faritra andrefan'ny Budapest no ahitantsika an'i Buda. Manana bisy ianao ary koa ny funicular hahatongavana any. Na dia tokony ho fantatrao aza fa raha mora ny dia, araka ny hitantsika dia tsara kokoa ny mandeha bus, satria somary lafo kokoa ilay faharoa. Ao no tokony hahitantsika ny Buda Castle, satria avy any dia hamela antsika hanana fomba fijery mahavariana momba ny tanàna iray manontolo. Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe Royal Palace ary efa fonenan'ny mpanjaka.
Aorian'ny fijanonana ao amin'ny trano mimanda dia hanohy mankany amin'ny Fiangonana Matthias. Izy io dia iray amin'ireo fiangonana malaza indrindra any Budapest, miaraka amin'ny fomba neo-Gothic. Iray amin'ireo hevi-dehibe tokony hodinihina ihany koa, amin'ny dia ataonay ambany.
Izy io dia fomba fijery, izay hita ao amin'ny havoanan'i buddha. Manomboka eto dia azonao atao ihany koa ny mahita ny Parlemanta sy izay rehetra avelan'ny fijery jerena amintsika. Mazava ho azy fa maro ny olona no manoro hevitra fa hatao ity fitsidihana ity rehefa tapitra ny andro. Mihoatra noho ny zava-drehetra satria hahazo sary tonga lafatra ianao, miaraka amin'ireo fampisongadinana izay tianay be.
Araka ny azontsika antoka fa efa fantatsika, tetezana iray izay misy lanjany lehibe izany. SATRIA mampiray ny ampahan'ny Buda ary koa ny an'ny Pest. Voalaza fa io no tranainy indrindra, na dia marina aza fa nandritra ny Ady lehibe II, dia nianjera avokoa ireo tetezana rehetra. Ka nisy vaovao nipoitra, 100 taona katroka taorian'ny voalohany.
Ny lehibe indrindra eto amin'ity toerana ity ary mitondra ny anaran'ny mpanjaka voalohany any Hongria. Naharitra antsasaky ny taonjato mahery vao vita io toerana io. Azonao atao ny miditra amin'ireo tilikambo, avy amin'izay alehany tsy ilazanao hoe hanana fomba fijery mahavariana ianao, izay tokony tsy ho diso anjara. Na dia noho izany aza dia tsy maintsy mandoa ianao.
Kianja mahery fo
Kianja fihaonan'izy ireo ireo sarivongan'ireo mpitarika mpanorina rehetra an'i Hongria. Ka izany dia sarotra arafitra arahana. Afaka mankany aminy ianao amin'ny maraina, mba hahafahanao manohy ny dianao mamaky ny valan-javaboary ao an-tanàna.
Tsy isalasalana fa tsy ho diso ny sasantsasany amin'ireo tranombakoka isika, na hiala sasatra amin'ny fiantsenana mizaha gastronomy ny faritra. Satria mila mandamina ny tenanao foana ianao mba hahitanao sy ahafahanao manao araka izay tratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » tolotra » Mandeha any Budapest izahay mandritra ny 40 euro